Ginkgo Biloba ၏ ကောင်းကျိုးများ နှင့် သင်၏မှတ်ဉာဏ် - Hello Sayarwon
Ginkgo Biloba ၏ ကောင်းကျိုးများ နှင့် သင်၏မှတ်ဉာဏ်
Maidenhair tree လို့ လူသိများတဲ့ Ginkgo biloba ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှေးအကျဆုံး အပင်မျိုးစေ့တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Ginkgo ပင်တွေဟာ အလွန်ထူးခြားတဲ့ အစွမ်းသတ္တိတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပေ၁၃၀ ကျော်အထိ မြင့်နိုင်ပြီးတော့ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်တဲ့ အထိ အသက်ရှင်နေနိုင်ကြပါတယ်။ မကြာသေးမီနှစ်တွေက Ginkgo အာဟာရတွေဟာ အလွန်ထင်ရှားလာပါတယ်။ သူတို့ဟာ အခုလောလောဆယ်မှာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ဆေးဖက်ဝင် အပင်နဲ့ ဖေါ်စပ်ထားတဲ့ ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Ginkgo ဟာ အရေးကြီးတဲ့ တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး Ginkgo ရွက်နဲ့ အစေ့တွေဟာ နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ Ginkgo က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းကို အပင်ရဲ့ ခြောက်သွေ့တဲ့ အစိမ်းရောင်အရွက်တွေကနေ ထုတ်ယူပြီးတော့ အရည်ပုံစံ၊ ဆေးတောင့်ပုံစံနဲ့ ဆေးပြားပုံစံ ဆိုပြီး ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Ginkgo bibola ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ
နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာအောင် Ginkgo ပင်တွေဟာ တရုတ်ပြည်မှာ ဆေးပညာအတွက် မသုံးမချင်း ကမ္ဘာပေါ်က ပျောက်ကွယ်သွားပြီလို့ ထင်ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ Ginkgo ကို မှတ်ဉာဏ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကို သက်သာခြင်းကြောင့် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ Ginkgo စေ့ကိုလဲ အားအင်တိုးစေဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။
Institute for Natural Products Research အရ Ginkgo biloba ရဲ့ အခြားအသုံးဝင်ပုံတွေကတော့
အိပ်ရာတွင်း ဆီးသွားခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်း
ဆီးအိမ် ကျိန်းစက်ခြင်းကို လျှော့ချပေးခြင်း
ဆီးပူညောင်းကျရောဂါကို ကုသပေးခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ဉာဏ်တိုးခြင်း၊ သတိမေ့ရောဂါ၊ အယ်လ်ဇိုင်းများရောဂါ
ဈေးကွက်အတွင်းမှာ ဦးနှောက်ကောင်းစေတဲ့ ဆေးတွေ အတော်များများ ရှိသော်လည်းပဲ တော်တော်များများ က ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ မှတ်ဉာဏ်ကောင်းအောင် လုပ်ပေးလဲဆိုတာကို သုတေသန လုပ်ထားခြင်း မရှိပါဘူး။
Ginkgo biloba ဟာ အခြားဆေးတွေထက်စာရင် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး Europe မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ သတိမေ့ရောဂါ အတွက် သုံးလာတဲ့ ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့ Lausier, MD, assistant clinical professor in medicine, Duke Integrative Medicine, Duke University Medical Center in Durham, N.C က ပြောပါတယ်။ Ginkgo biloba ဟာ သွေးကြော သေးသေးလေးတွေထဲမှာ သွေးလည်ပတ်မှုနှုန်း ကောင်းစေပါတယ်။
လေ့လာစမ်းစစ်ချက်တွေအရ Ginkgo biloba ဟာ သတိမေ့ရာဂါ အတွက် ကောင်းသလို အယ်လ်ဇိုင်းမား ရောဂါ အတွက်လည်း ကောင်းတယ်လို့ ဂျော့တောင်းတက္ကသိုလ်မှ တိုင်းရင်ဆေး ဌာန တွဲဖက်ပါမောက္ခ Adriane Fugh-Berman က ပြောပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေ ပိုမိုလိုအပ်သေးပေမယ့်လည်း Ginkgo biloba ကိုသောက်ခြင်းအားဖြင့် သတိမေ့ရောဂါ ကို ကုသနိုင်တယ်ဆိုတာကို သက်သေပြခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုတွေ ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အကျိုးရှိမှုတွေထဲမှာ အောက်ပါအချက်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
လူမှုရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမူအကျင့်တွေ တိုးတက်လာခြင်း
မှတ်ဉာဏ်ကို တိုးတက်စေဖို့ ဘယ်ဖြည့်စွက်စာတွေကို စားသင့်ပါသလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ အရာတွေကတော့ လေ့လာမှုတွေ ပိုမိုလိုအပ်နေသေးပေမယ့် မှတ်ဉာဏ် ပိုမိုကောင်းစေတဲ့ အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အိုမီဂါ ၃- အိုမီဂါ ၃ ငါးကြီးဆီဟာ မှတ်ဉာဏ်အတွက် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေက ရေငန်ငါး၊ အပင်နဲ့ အခွံမာဆီ မှာ ပါဝင်တဲ့အိုမီဂါ ၃ စားသုံးမှုများခြင်းဟာ အယ်လ်ဇိုင်းမား ရောဂါ ရရှိမှု နည်းပါးခြင်းနဲ့ ဆက်နွယ်နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကို သက်သေပြဖို့တော့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။
Chinese club moss လို့ လူသိများတဲ့ Huperzine A ဟာလည်း အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါဆေးတွေလိုမျိုး အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရမှုနဲ့ အစွမ်းထက်မှုတွေကို အတည်ပြုဖို့ လေ့လာမှုတွေ လိုအပ်ပါသေးတယ်။
Acetyl-L-carnitine ဟာ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါသည် တွေမှာ မှတ်ဉာဏ်ကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေက ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ စဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပွားနှုန်းမြန်တဲ့ သူတွေမှာ ပိုမို အကျိုးကျေးဇူး ရှိပါတယ်။
ဗီတာမင် အီး – ဗီတာမင် အီးဟာ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းကို မလျှော့ချနိုင်ပေမယ့် သူပိုမိုဆိုးရွားလာမှု နှုန်းကိုတော့ နှေးကွေးစေပါတယ်။ မကြာသေးမီက လေ့လာမှုတွေက ဗီတာမင်အီး အများအပြားသောက်သုံးတဲ့ လူနာတွေမှာ သေနှုန်းပိုများတွေကို တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါကို မသောက်သုံးခင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အာရှဂျင်ဆင်း(Panax) – Ginkgo biloba နဲ့တွဲသုံးတဲ့ ဆေးဘက်ဝင် အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သူဟာ မောပန်းခြင်းနဲ့ ဘဝ အရည်အသွေးအတွက် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
Ginkgo Biloba: Health Benefits, Uses, Risks.
http://www.medicalnewstoday.com/articles/263105.php. Accessed October 20, 2016.
Ginkgo Biloba Benefits and Your Memory. http://bebrainfit.com/ginkgo-biloba- benefits/. Accessed
Fortifying Your Memory With Supplements. http://www.webmd.com/diet/features/fortifying-your-memory-with- supplements#1. Accessed October 20, 2016.
Ginkgo biloba may help memory, but may have serious health risks.
http://center4research.org/healthy-living- prevention/vitamins-dietary- supplements-and- over-the-counter-medications/ginkgo- biloba-may- help-memory- but-may- increase-stroke- risk/. Accessed